Sei kudzorera chigadzirwa paAmazon nenzira yakapusa nzira? | ECommerce nhau
Amazon yakagara ichizivikanwa nekuve ikambani ine mutoro nevatengi vayo nevatengesi, ndosaka ichiiswa mune imwe ye nzvimbo dzakanakisa pasirese, mune e-commerce chikamuIvo vanogara vaine zvigadzirwa zvakanakisa, nemitengo yemakwikwi zvakanyanya uye iine garandi yekukurumidza kuendesa, uye kudzoka kunovimbika kana zvigadzirwa zvavo zvikasazadzisa zvaunotarisira.
Sezvo chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti iwe uwane mufananidzo wakanaka weAmazon kunyangwe ukasazopedzisira washandisa mari yako ipapo, pamwe nekukurumidza kana gare gare unofanirwa kutenga chimwe chinhu zvakare kuburikidza neiyi nzira, mukuwedzera, kutsamwa kukambani ndiyo chinhu chakaipisisa chinogona kuitika kwachiri, chinokonzeresa makomendi akashata, kutsoropodza nekusatendeseka kwevamwe vanhu vese muchiratidzo, saka Jeff Bezos 'yemarudzi mazhinji kambani haina njodzi chiitiko chakadai, uye nguva dzose ipa mamiriro akakwana uye akareruka kudzosa chero chigadzirwa izvo zvisina kuita zvaunoda.
Kana iwe wakagamuchira chigadzirwa, uye handizvo zvawaitarisira, kana pamwe wakarayira chimwe chinhu netsaona kuAmazon, uye iwe uchida kuchidzorera, wasvika panzvimbo chaipo, apa isu ticha tsanangura. Maitiro ekudzosera ichi chigadzirwa uye kugamuchira kudzoreredzwa kwemari yako kana kuchinjana kwayo.
1 Nhanho nhanho kudzorera chigadzirwa paAmazon
2 Kumbira kudzorerwa kwekutenga kwako
3 Iwe unozowana iyo Amazon Inodzosera nzvimbo
Nhanho nhanho kudzorera chigadzirwa paAmazon
Kana iwe ukaona kuti izvo zvangosvika pamba pako hazvisi izvo zvawanga uchifunga kuti zvinosvika, usazvidya moyo, inonyanya kudiwa Electronic Commerce chikuva pasirese, Iyo ine inoshanda kwazvo yekudzosera sevhisi, kuitira kuti, zvichienderana nemutengesi uye newaranti sarudzo, iwe unogona kudzosera yako yese yekudyara kana chikamu chemari yawakabhadhara.
Kugona kudzosera chero chigadzirwa paAmazon, unofanirwa kufunga kuti iyo nguva yekudzoka mukambani iyi mazuva makumi matatu, kubva pakutambira, kuitira kuti iwe usazokwanisa kunyorera kana kupfuura ino nguva yapfuura.
Rangarira kuti zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti chigadzirwa hachisi icho chawaida, koshesa zvawanga uchitarisira kuva nazvo uye kana usiri kuchazoda zvakare, nekuti unogona kuzvidemba mushure, funga kuti pamwe icho chigadzirwa ndeyekubva kune ekupedzisira uye hauchakwanise kuwana chinjana, kudzoserwa chete, saka funga kaviri usati waendesa chigadzirwa chasvika pamba pako, Kunze kwekunge iwe uine chokwadi chekuti icho chinhu chausingade uye chisingazoshandise icho chakatarwa chinangwa, inguva yekutanga nzira yekudzoka.
Kutanga maitiro, iwe unofanirwa kuvhura browser rako, pinda iyo Amazon webhusaiti.
Ipapo unofanira pinda papuratifomu neakaunzi yako uye password uye iwe unofanirwa kuenda kuchikamu icho chinoti Yangu mirairo. Icho chiri muchikamu chino umo iwe uchazotsvaga marongedzero ayo chinhu chauri kutarisira kudzoka chiripo, ivo vacharongeka maererano nenguva saka hazvizonetse kuzviwana, kana uchinge wasarudzwa tinya kwainoti Devolver kana kutsiva zvigadzirwa, izvo zvinokuendesa kune rimwe hwindo.
Muhwindo rinotevera, Sarudza kubva kudonho-pasi icon, chikonzero icho chakutungamira kuti ude kudzorera chinyorwa, kunyora chirevo munzvimbo yemavara ndechokusarudzika, asi zvinoshanda mune dzakawanda kesi kuti uve wakanyanya nezve kukundikana kwechigadzirwa, wobva wadzvanya kwazvinoti Enderera.
Zvinoenderana kuti ndeipi iyo chikonzero chekudzoka kwako chakasarudzwa kare, Pachiratidziro chinotevera unogona kukumbira shanduko muchinhu, kungava saizi, ruvara, kana basa, izvo zvaunofanirwa kuita kutumira chigadzirwa zvakare, uye mushure menguva pfupi iwe uchazoziviswa, iwe uchagamuchira chigadzirwa chitsva, uchimirira kugutsikana kwako kwese, kana zvisiri, unogona kuchinjana kana kudzoka zvakare, usatya kurasikirwa nemukana wekutora chako ndechakanaka.
Ndokunge, chigadzirwa senge icho chawaona mumifananidzo nerondedzero, padandemutande, Zvinosungirwa neAmazon kukutumira zvauri kutenga, Chero kukanganisa pane izvi ibasa rekambani uye kunokusunungura kubva kumabasa, saka usazvidya moyo kuti unogona kudzorera chero chigadzirwa kakawanda pazvinenge zvichidikanwa, kusvikira kugutsikana kwako kwapera.
Kana iwe usisiri kuda kuziva zvakawanda pamusoro penyaya yakataurwa, iyo yauya kwauri, kana iwe wakangodemba kuutenga, unogona zvakare rkumbira kudzoserwa kuzere kwemari yako. Sarudza sarudzo yaunoda uye tinya Enderera.
Iwe unofanirwa kurangarira kuti mune icho chiitiko icho chinhu chacho hachina kutengeswa neAmazon, asi chakatengwa kubva kune chimwe chitoro uye chakatumirwa neAmazon, Chikumbiro chako chekudzoka chingafanira kutenderwa nemutengesi, saka maitiro acho haasi mumaoko eAmazon uye iwe unotofanira kumirira kubvumidzwa kwavo kuti vadzosere mari yako kana kutumirazve.
Kumbira kudzorerwa kwekutenga kwako
Kana iwe wakasarudza kukumbira yako yekudzoserwa, zvinoreva kuti chigadzirwa chauya kwauri chakakuodza moyo zvachose kubva pakutenga chero imwe ine chitarisiko chiri nani kana nemamiriro akasiyana, kazhinji hazviitike nezvigadzirwa zvinobatwa neAmazon, asi kana iwe uchifunga kuti ndiyo yakakodzera kwazvo, uye isu hatigone Kuita chero chinhu nezvazvo kuvandudza kutenga kwako, uchave nesarudzo yekusarudza nzira yaunoda.
Zvimwe kuburikidza ne Amazon chipo vocha, izvo zvinozokudzwa kuaccount yako panguva yavanogashira chako chakadzoserwa chigadzirwa, kana sarudza iyo yetsika nzira yekubhadhara, sarudzo inotora pakati pemazuva mashanu ne5 kuti vadzorere mari kana chinhu changotambirwa.
Muhwindo rinotevera iwe uchafanirwa kusarudza pakati pe dzakasiyana nzira dzekudzoka dziripo. Iko kune sarudzo yekuti iwe, uiendese zvakananga kupasuru kana posvo hofisi inoratidzwa, unogona zvakare kukumbira kuti avo vemakambani aya vauye kuzotora kumba kwako. Zvichienderana nechigadzirwa chawatenga uye mutengesi, Basa racho richava remahara kana iwe uchabhadharwa mari zvichienderana neimwe nzira yekuendesa kwechigadzirwa.
Iwe unozowana iyo Amazon Inodzosera nzvimbo
Paunenge wapedza kuita uku, Amazon ichakupa iyo faira ine zvinyorwa izvo zvaunofanirwa kuprinta, kucheka nekunamatira pane iyo package yauri kuzotumira. Imwe yema Labels iwe unofanirwa kuisa mukati mehomwe, uye imwe yacho uchafanirwa kuinamatira kunze kwepakeji.
Ipapo, zvinongoramba zvichingoenda nazvo ku parcel kana posvo hofisi yawaka kupihwa iwe, kana iriyo sarudzo yawakasarudza, kana chingomirira kana wakumbira kunhongwa wakananga kumba kwako.
Amazon painongogamuchira yako pasuru, iwe unozobhadharwa mari inoenderana newe mukati menguva yakambotaurwa.
Amazon nhasi ndiyo imwe yezvitoro zvepamhepo zvinoshandiswa pasi rese, uye zviri pachena kuti ndeimwe yevakakurumbira muSpain yese, uko yanga isiri kushanda kwenguva yakareba zvakadaro, asi yakatotyora marekodhi akati wandei uye yakawedzera nzvimbo yayo yezvinhu zvinoshandiswa nevashandi vakawanda.
Iyo kambani yakagadzirwa naJeff Bezos inopa akawanda mabhenefiti kana uchitenga kubva pairi, sezvo ichipa mukana wekutenga chero chinhu, uyezve kuchidzosera zviri nyore uye pasina kushandisa chero chinhu, kana iwe usingawirirane nezvawanga uchitarisira kubva kuchigadzirwa chasvika.
Tinokuyeuchidza kuti iyo nguva yekudzoka yakakwira mazuva makumi matatu, kunyangwe paine dzimwe nguva pagore, umo nguva iyi inowedzera zvakapetwa. Kutaura muenzaniso, mu yeKisimusi yekupedzisira, Amazon yakawedzera nguva yekudzoka pane zvigadzirwa zvayo, pamusoro pemazuva makumi matanhatu, saka kuti munhu wese ave nechivimbo uye chokwadi chekutenga pasina kufunga kuti vane nguva pfupi yekuita zvingangoita kudzoka pakutengesa.
Semuenzaniso, kana chinhu chawakakumbira chasvika chakatyoka kana chisina kuvhurika, kana chikasvika neruvara iwe chawaisatarisira, kana kana iwe uchida kudzorera dzimwe shangu dzisina kukodzera., iwe unenge uine mukana wekukumbira kuti vamwe vakutume nehukuru hwakakodzera. Kana iwe wakaziva kuti izvo zvinhu uye hunhu hwechigadzirwa zvaive zvisiri izvo iwe zvawaitarisira, zvese hazvirasike, iwe uchiri kugona kugamuchira kudzoserwa kwezvawakabhadhara icho chigadzirwa, kana changosvika kumahofisi eAmazon. Chero ipi yesarudzo idzi haizoratidze chero mari yekuwedzera muhomwe yako.
Chete mune nyaya yekuti chinhu chacho hachina kutengeswa neAmazon, maitiro acho anoenderana nemutengesi, uko Amazon ichangoshanda chete sepasuru mutauriri.
Kana iwe uchida kukumbira shanduko, iyo nguva inofungidzirwa ichave ipfupi sezvo Amazon ine hanya nezve mhando yekuendesa uye sevhisi kune vatengi vayo, saka kugutsikana kwako mukutenga ndicho chinhu chakanyanya kukosha.
Edza kusarudza zvine hungwaru kuti unoda kudzorera sei chigadzirwa, ikozvino zvaunoziva nzira dzakasiyana dzekuzviita, iwe unogona kuve nesarudzo yehungwaru pakusarudza nzira yekudzoka yechigadzirwa chesarudzo yedu.
Kubva pakuwana kuchinjanisa kwechigadzirwa kumubhadharo wakazara wemari yako, neAmazon hauzove nedambudziko rekugamuchira izvo zvaunoda kana pazvinenge zvakakodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » / Ungadzore sei chigadzirwa paAmazon?
Delia diaz akadaro
Zvakanaka, handina kuwana nzira yekuuya kumba kwangu kuitora.
Ini handinzwisise chokwadi. Sezvavanouya nazvo, vanofanirwa kutumira kudzoka.
Kune 2 tf yeatc. Basa revatengi izvo zvisiri. Uye hapana nzira yekutaurirana neamazon. Saka ATC inoyamwa. Uye Amazon zvakare.
Nekuti ini ndakahodha zvinhu zvakati wandei muDecatlon uye ini ndakaigashira pamberi paAnazon uye ini ndikabhadhara zvinhu zvandakahodha.
Musiyano mukuru ... hongu.
Ini handisi kufara neamazon.
Pindura Delia Diaz
Saka ivo havatore kudzoka? chii mhino tobva tazoita sei ???????
Ndine urombo handigone kupfupisa; Ndinoda tsananguro refu:
- Nekuda kwezera rangu ndine zvinonetsa kutsungirira tambo yekuteedzana mabhatani anokosha kuti kutenga kutenge zvakanaka.
- Zvirokwazvo nekukanganisa ndakaita kutenga iyo odha yaidzokororwa mwedzi wega. Uye izvo handizvo zvandaida.
- Pakasvika wechitatu kana wechina ndakazviramba uye nekuda kweizvozvo vakandibata, nekuti zvikasadaro zvaisakwanisika: Yakanga iri labyrinth umo mukuyedza kwese kwandakarasa: Mhinduro chete yaive yekuramba chikumbiro. Pese pandinoedza nemaitiro avo, ivo vairatidzira imwe yeayo matatu kana mana mhinduro dzinogona uye iyo yaindibata yaisambove pakati pavo. Kwandiri yaive yechokwadi labyrinth, "mousetrap" yaiwedzera kundishungurudza. Vanofanira kuvhura imwe nzira yekupindura …… Zvinogumbura chaizvo, uye zvinoshungurudza. Zvakafanana nekutaura kumadziro.
Ezequiel Puig Farran akadaro
Pasuru haina kusvika pamaoko angu, avo veseur vakaidzorera
Pindura kuna Ezequiel Puig farran
Rafael Fernandez Bellido anochengeta mufananidzo akadaro
Amazon ndiyo yakaipisisa, yakaipisisa, yakaipisisa, iripo. Ivo vane tsinga yekutsiva basa revatengi nechikwangwani chinokumbira ruregerero chekonavirus. Ndanga ndichiedza kutaura naye kweinenge mwedzi miviri, pasina budiriro kunyangwe ndichiedza nzira dzakasiyana siyana. Kudzoka ijee rinoshanda uye bhuku remanyepo. Ndave ndakamirira kwemwedzi miviri kuti mbiri dzinogamuchirwa dzidzoswe, dzezvinhu zvakatosvika zvakashatiswa kubva zvisati zvaburitswa. Ini ndichaedza mune ramangwana kutaura zvakashata sezvandinogona zvekambani ino. Uye zvechokwadi ini ndinopa zano chero munhu akatenga neimwe nzira.
Pindura kuna Rafael Fernandez Bellido
Ndakasarudza kuuya kuzotora, asi nguva yakafamba uye havana kuzviita uye ini handizive zvekuita.
Facebook inoshanda sei?